Saraakiil Alshabaab ah oo la sheegay in ay ku dhuumanayaan xaafadda Buula-jaan ee magaalada Marka (Faahfaahin) - jornalizem
Saraakiil Alshabaab ah oo la sheegay in ay ku dhuumanayaan xaafadda Buula-jaan ee magaalada Marka (Faahfaahin)
Cabdi Muuse oo ah Sarkaal shabaab u qaabilsan iibinta Biyaha wabiga ee lagu waraabiyo Beeraha iyo Sahal Iskudhuuq oo ah Sarkaalka Shabaabka u qaabilsan Waaxda Caafimaadka ayaa la xaqiijiyey inay ku sugan yahiin waaxda Buulajaan ee xaafada Horseed ee Magaalada Marka, Xaafada Buulajaan ayaa ah waax ka mid ah Xaafada Horseed ee magaalada Marka, Magaalada Marka ayaa ka kooban 3 Xaafadood oo lagu kala magacaabo Horseed, Hawl wadaag iyo Wadajir.
Beel Kamid ah Labada Beel ee isku haya Gobalka ayaa daacad u noqday Maliishiyaadka Al shabaab iyo Alqaacida ayaa guryo ku leh waaxda Buulajaan ee Xaafada Horseed oo ka mid ah 3da xaafadood oo magaalada Marka, waaxda Buula jaan ayaa ah meesha kaliya ee ay si nabad ah ku joogaan Maliishiyaadka Alshabaabka iyo Alqaacidada Soomaaliya.
Sahal Iskudhuuq iyo Cabdi Muuse ayaa la xaqiijiyey inay maanta ku sugan yahay waaxda Buula Jaan ee Xaafada Horseed oo kamid ah Xaafadaha Marka, Sahal iskudhuuq iyo Cabdi Muuse ayaa ah labada sarkaal ee shabaabka Ahmed Godane u qaabilsan inuu dagaalo qabiil ka huriyo Magaalada Marka iyo Guud ahaan Gobolka Sh/hoose.
Sahal iskudhuuq iyo Cabdi Muuse ayaa la sheegayaa inay kusoo biiriyeen maliishiyaad badan oo Al shabaab ah ninka sheegta Gudoomiyaha Degmada Marka Yariisoow, Maliishiyaadkaan ayaa la sheegayaa in qaarkood ay ka tirsan yihiin guutada shabaabku ku magacaabaan guutada ishtihaadiyada, maliishiyaadkaan ayaa la sheegayaa in qaarkood doonayaan inay isku qarxiyaan Madaxda dawladda, Gaar ahaan Wasiirka Arrimaha Gudaha Mr Cabdikariin oo dhowaan la filayo inuu tago Magaalada Marka.
Maliishiyaadka Beesha Biimaal ku biiray ee Al shabaabka, kuna sugan Magaalada Marka iyo KM50 Maalmihii la soo dhaafay ayaa la sheegayaa inaan Al Shabaabku iyaga weerar u geysan Halka Ciidamada Dawladda Soomaaliya ee ku sugan Shalaanbood, Janaale, KM60, Buufoow, Laanta Buuro, Muuri, Buushka in iyaga Alshabaabku habeen kasta weeraro isdaba jooga u geystaan.
Dawladda Soomaaliya ayaa ilaa hadda wax ka qaban la’ maliishiyaadka Shabaabka ee shaarka qabiilka gashan ee ku sugan degmada Marka, Maliishiyaadkaan ayaa ujeedkii dawladda ee ahaa in Alshabaabka laga saaro dhamaan Gobolka u bedelay Dagaal qabiil oo ay doonayaan in dawladda iyo AMISOM ay uga leexiyaan hadafkii ahaa dabargoynta Shabaabka.
Isku soo wada duube shalay iyo maanta ayaa la sheegayaa in Maliishiyaadkii Alshabaabka iyo Beesha maciinka biday Alshabaabka ee Biimaal in Dharbaaxo kulul ku dhufteen ciidamada Beelaha Degaanka.